ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနှင့် ရိုဟင်ဂျာအရေး တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
နိုင်ငံတကာမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသက ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြနိုင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူအင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ရှင်းလင်း ပြောကြားနေစဉ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသက ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြနိုင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ဝန်ကြီးရဲ့ ရုံးခန်းမှာ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးလှစောနဲ့ မေးမြန်းခန်း
Oct 11, 2012 08:45 PM
in myanmar before1962. in democrat government time, ethnic 144. in milatry government time, they like n write , it is not legal, so , why this democrat government like n take ;it.
နေရပ်- မ ,ဦ,‌ေ တာင္
minister say , it is right,there is no rohingya in myanmar terms,and also (135)minority group,so that they are try to take our native land,we must united all the people in myanmar, am i right?